Apple Watch - Apple Watch | Waxaan ka socdaa mac
Ugu dambeyn kadib laba dherer kusano xan ka buuxo iyo mala-awaal ku saabsan suurtagalnimada Apple iWatch, ee Deyntii ugu dambeysay ee Talaadadii Sebtember 9, 2014 Apple waxay na soo bandhigtay iyada daawashada caqliga. Saacaddan oo aan dhammaanteen u maleyneynay in loogu yeeri doono iWatch sababo la xiriira shatiyada badan ee Apple ay ku leedahay magacan, ayaa ku dhammaatay oo loo yaqaan e Apple Watch si aad u qalajiso
Maamulaha guud ee shirkadda, Tim Cook, wuxuu ku soo bandhigay Muhiimka 9-kii Sebtember, 2014 ka dib weedha quraafaadka ah ee uu caanka ku noqday shirkadda lafteeda markii uu Steve Jobs ku xusay bogga. «Hal shay oo kale ...» Waxyaabahan More ayaa ah kii ugu horreeyay ee Tim Cook taariikhdiisa maamule sare ee Apple mana joojin inuu ku dhiirrigeliyo dadweynaha rajada inay mar labaad dhageystaan waxa ay aad u jeclaayeen.
3 moodooyinka Apple Watch
Apple waxay soo bandhigeysaa Daawadan cusub si ay ugu farxaan dadweynaheeda waana lagu dhiirrigeliyay bilaabitaankeeda saddex nooc oo kala duwan iyo laba cabbirda 'kala duwan curcurka ragga iyo dumarka. Tusaale ah birta, moodal isboorti aluminium iyo wicitaan kale Edition de 18 karat dahab.
Sidan oo kale, Apple wuxuu joojiyaa mala-awaalka iyo kutiri-kuteenka isagoo soo bandhigaya waxa loogu yeeray inuu noqdo wehelkaaga kaamil ah qalabkaaga macruufka ah iyo gaar ahaan iPhone.
Aniga oo ka imid Mac waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka ku saabsan kan ugu horreeya ee la gashado shirkadda shirkadda tufaaxa qaniinyada laga bilaabo maalinta ugu horreysa ee la soo saaro. Ku raaxayso ah Apple Watch iyo wararkaaga oo dhan nala soco.
by Jordi Gimenez samee Miinooyinka 10 .
Iyadoo imaatinka sanadka cusub ee Lunar laga bilaabo Febraayo 1 ilaa 15 ee Aasiya, shirkadda Cupertino ayaa bilaabi doonta…
watchOS 8.4 RC waxay hagaajisaa arrimaha dallacaadda Apple Watch
by Tony Cortes samee 5 maalmood .
Waanu arki doonaa haddii wakhtigani yahay kii u dambeeyay. Waxaan nidhi mar kasta oo Apple ay sii deyso cusboonaysiinta watchOS…
Gurman waa rajo la'aan ku saabsan dareenka heerkulka ee taxanaha tufaaxa 8
by Jordi Gimenez samee Toddobaadyada 2 .
Wararka xanta ah ayaa yimaada oo taga sida dabayshu u dhacayso iyo waxa toddobaadyo ka hor ka badan oo suurtogal ah hadda ...
by Jordi Gimenez samee Toddobaadyada 3 .
Mararka qaarkood u wacitaanka adeegga degdegga ah ee waqtiga saxda ah wuxuu badbaadin karaa nolosheena tanina waa ...
Qaar ka mid ah isticmaalayaasha Apple Watch Series 7 ayaa la kulma arrimo lacag ah ka dib markii ay cusboonaysiiyeen ka dib markii ay u cusboonaysiiyeen ...
Ku shakhsiyeeyo Apple Watch kaaga gidaaradan X-ray
Bilowgii Oktoobar, nimanka iFixit waxay wadaageen falanqeyntooda dhaqameed ee Apple Watch Series 7 ee kala diristooda ...
Waxay dacwad ka gudbiyeen Apple iyagoo ku andacoonaya in Apple Watch uu sababi karo dhaawac jireed
by Tony Cortes samee Bilaha 2 .
Hadii aynu ku darno fudaydka ay qaarkood ku dacweeyaan shirkado waaweyn cudurdaar kasta oo ay ku helaan macaash,...
Nooca WatchOS 8.3 Musharaxa Siideynta wuxuu ku darayaa AssistiveTouch moodooyinka Apple Watch ee da'da ah
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee nooca cusub ee watchOS 8.3 Musharaxa Siideynta ayaa ah inay ku darto shaqada AssistiveTouch ...
Miyaad u aragtaa Apple oo bilaabay saacad nooca G-Shock ah oo macquul ah?
Mid ka mid ah wararka xanta ah ee aan maskaxda ku hayno saadaasha Mark Gurman ee ugu dambeysay ayaa ah in shirkadda Cupertino ...
Warar xan ah oo cusub oo ku saabsan Apple Watch "G-SHOCK"
Had iyo jeer waxaa i xiiseeya saacadaha sumadda Casio. Tan iyo markii aan lahaa kii ugu horreeyay ee leh xisaabiye, waqtigeyga ...
by Manuel Alonso samee Bilaha 2 .
Habka ay Apple ku ogaatay inay kugu dhiirigelinayso inaad si fiican u socoto waxa loo yaqaan "Waqtiga Socodka". Jirdhiska +...
Xalka haddii Apple Watch uusan kuu sheegin waqtiga lala hadlayo Minnie iyo Mickey
Baro sida loo soo dejiyo oo loogu rakibo barnaamijyada Apple Watch-kaaga